Zorin OS Pro, iro zita idzva reiyo Yekupedzisira edition | Linux Vakapindwa muropa
Nekusvika kweLibreOffice 7.1, Iyo Gwaro Foundation yakaunza Enterprise vhezheni ine rutsigiro rwakagadziridzwa uye zvakakosha zvinhu. Vazhinji vedu hatidi izvo zvinowedzera, saka tinoshandisa iyo Rudzi rwemunharaunda. Chimwe chinhu chakafanana naZorin Technology Group Ltd., uyo maminetsi mashoma apfuura ave nemufaro wekuzivisa Zorin OS Pro. Kunge Enterprise edition yeLibreOffice, ichi chitsva chikumbiro chakagadzirirwa makambani, asi zvakare kune vanonyanya kudhira vashandisi. Uye, zvakanaka, hazvisi zvitsva zvachose.
Iko kuratidzwa kweZorin OS Pro izere neruzivo kutaura nezve mabhenefiti achaunzwa neiyi nyanzvi vhezheni yesystem yako yekushandisa. Sezvo zvinhu zvinowanzo kuuya kuburikidza nemaziso edu, Zorin OS 16 Pro inosvika nayo ina Premium nzvimbo, pakati payo ichave macOS maitiro uye imwe ine dhizaini yeWindows 11 iyo Microsoft ichangobva kuburitsa.
Zorin OS Pro inosvika neine mana akasarudzika maficha
Isu tinofara kuunza iyo nyowani vhezheni yeZorin OS. Zorin OS Pro inounza pamwechete akanakisa kunyorera uye epamberi maficha, kuti iwe ugone kuburitsa izere kugona kwecomputer yako kuti uite basa rako repamoyo. Iyo inouya neyedu technical technical service kuti iwe ugone kumuka uye kushanda mushe. Uye kutenga kwese kunobatsira kubhadhara kuvandudzwa kweiyo Zorin OS chirongwa kubatsira vese.
Hunhu hwavanotaura sehunokosha ndehwokuti:
4 yakasarudzika Premium maficha.
Mapurogiramu ehunyanzvi uye maapplication, kunyangwe chokwadi chiri chekuti tichiona kuti imwe yacho ndiKdenlive, ndinofunga tinogona kuzviisawo pachedu mune isiri-Pro vhezheni.
Yakagara-yaiswa yekugadzira mapurogiramu.
Kugona kugovana mbeva uye keyboard pane akawanda makomputa.
Kugona screencast (tumira vhidhiyo uye odhiyo kune imwe skrini).
Pro Lite edition yemakomputa ekare.
Zvishandiso rutsigiro rwekuisa.
Zorin OS Pro ichave iri inotevera inotevera August 17, kutanga neshanduro 16. Inozotsiva Zorin OS Ultimate kubva zvino zvichienda mberi, uye ichave ichiwanikwa nemutengo mumwe chete. Isu tinorangarira kuti iyo yakanyanya kuvandudzwa yakagadzikana vhezheni Iyo Zorin OS 15.3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin OS Pro, iro zita idzva reiyo Yekupedzisira edition yevanonyanya kuda vashandisi nemakambani
Ivo vanofanirwa kuve nega voga kupfuura nehumwe kumeso, pavanozotanga zvirinani kunyorera zvikumbiro kana kuenda kuGNU iyo inomhanya chete paWindows kuti ishandiswe pasina waini newaini emulator panguva iyo painenge ichirongedzwa mumakumi matanhatu
Zvakanaka zvitsva. Mà chờcó ai chứ không Có tiền mua.
Pindura kuna Devlin